Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika VaWalter Mzembi vokurudzira vatori venhau kuti vanyore nyaya dzakanaka nezveZimbabwe asi venhau ava vanovaudza kuti hurumende ndiyo inofanira kubvisa mitemo inodzikirira vatori venhau. Irwin Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuti bazi ravo ringashande sei nevatori venhau mukushambadza Zimbabwe, VaMzembi vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zvavanoda uye izvi zvinoratidza kuti vakasununguka pakuita basa ravo.
Vati kunze kwekunyora zvakaipa pamusoro pehurumende nenyika, vatori venhau vanofanirawo kunyora zvinosimudzira chimiro chenyika.
VaMzembi vati kunyange hazvo paine zvimwe zvisina kunaka munyika, vatori venhau vanofanira kunyora nhau dzinoyananisa vanhu izvo zvinoita kuti vekunze vayemure pamwe nekuuya kuzoshanya nekuita mabhizimisi muno.
Pavabvunzwa kuti Zimbabwe ingashambadzwe sei ipo paine kupokana muhurumende, zvikuru pamitemo yakaita semaroadblocks, nemutemo wekuendesa dzehupfumi kuvatema, kupopotedzana pakati pemakurukota ehurumende nezvimwe, VaMzembi vati zvakakoshawo kuti vapepeti venhau vadzidzise makurukota aya kuti zvaari kuita hazvina kunaka.
Mupepeti wenhau webepa reThe Observer, VaBarnabas Tondhlana, vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kunyora zvakanaka pamusoro peZimbabwe nekuti zvinhu zvese zvaparara uye vatungamiriri vacho havana hanya nevanhu.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira vapepeti vakuru venhau, reZimbabwe National Editors Forum, VaNjabulo Ncube vaudza Studio 7 kuti havabvumirani naVaMzembi kuti vatori venhau vanoshanda vakasununguka munyika. Vati vatori venhau vano shungurudzwa nehurumende nguva zhinji.
VaMzembi vati nyaya yezvematongerwe enyika ndiyo yaibvunzwa kunyika dzese makumi masere uko vakaenda vachitsvaga rutsigiro apo vaida chigaro chemunyori mukuru wesangano reUnited Nations World Toursim Organisation.
Vati zvakakosha kuti vatori venhau vaburitse dzimwe nyaya dzezvakanaka zvinoitika munyika kwete kungoburitsa nyaya dzekupopotedzana kana kupokana munyaya dzematongerwo enyika.
Vatiwo hurumende inofanira kupa bazi ravo mari yakawanda kuti rishambadze nyika kunze vachiti pari zvino mari yavari kuwana ishoma zvakanyanya.
Bazi rezvekushanyirwa kwenyika rakapihwa mari iri pasi pechidimbu chimwe kubva muzana chebhajeti rese renyika.